प्रचण्ड र मोदीको २५ बुँदे संयुक्त बक्तव्य, ?अरू केके छन् ? (पूर्ण कथा पढ्नुहोस) « Himal Post | Online News Revolution
प्रचण्ड र मोदीको २५ बुँदे संयुक्त बक्तव्य, ?अरू केके छन् ? (पूर्ण कथा पढ्नुहोस)
प्रकाशित मिति : २०७३, १ आश्विन ०१:५४
१ असोज, नयाँदिल्ली । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले आइतबार अबेर २५ बुँदे संयुक्त बक्तब्य जारी गरेका छन् ।
आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएको थियो । भेटपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुबै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुका साथै तीन सम्झौता पनि भएको थियो ।
आइतबार नै अबेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी मोदीको २५ बुँदे बक्तव्य जारी भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माको भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त बक्तव्य जारी हुन सकेको थिएन ।
संविधानबारे के छ ?
अरू केके छन् ?